Muhaajiriinta Doonyanaha Ku Gala Yurub Oo Xeryo Qaxooti Looga Samaynaayo Barmuuda
Madaxda Midawga Yurub ayaa soo dhaweeyey qorshe lagu doonaayo in qaxootiga ku taga dalalka Yurub doonyaha xeryo qaxooti looga sameeyo meel ka baxsan Yurub. Dooda hadalkan ayaa soo baxday kadib markii Talyaaniga ay madax ka […]
Xildhibaan ka Tirsanaa Baarlamaanka Koonfur Africa Oo Toogasho Lagu Dilay.
Koox loo maleynayo in ay ahaayeen burcad ayaa toogasho ku dilay Sibusiso Radebe oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa Xisbiga ANC ee dalka Koonfur Africa. Madaxa iyo lugta ayaa laga toogtay kaddib markii qofka laga shakisan […]
Labada Hogaamiye Ee Isku Haya Talada Dalka Koonfurta Suudaan Oo ku Kulmaya Addis Ababa.
Labada nin ee xuddunta u ah dagaalka Suudaanta Koonfureed ayaa qaban doona kulankii u horreeyay ee waji ka waji ah muddo labo sano ah, waana isku day lagu doonayo in colaadda lagu joojiyo. Madaxwayne Kuxigeenkii […]
Diyaaradaha dagaalka ee Israa’iil ayaa weeraray goobo ay Qazo ku leeyihiin malayshiyo ka dib markii ay falastiiniyiintu gantaallo ku soo tuureen deegaannada Israa’iil, sida uu sheegay milatariga Israa’iil. Milatarigu wuxuu sheegay in la duqeeyay 25 […]
Dawladda Nigeria ayaa bariis sumaysan oo loo soo waday dalkeeda ku horjoogsatay mid ka mid ah xadadka ay la wadaagto wadamada Deriska ah. Bariiskan ayaa la rumaysan yahay in uu yahay Mid sumaysan, ilaa iminkana […]
Weerar Lagu Dilay 30 Askari Oo ka Tirsan Ciidamada Dalka Afghanistan.
Ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan ayaa la dilay kadib markii maleeshiyo la tuhunsan yahay inay yihiin Taliban ay weerar ku qaadaeen laba bar kontorool maanta. Madaxa golaha deegaanka Badghis ayaa […]
Maraykanka Oo Ka Bxay Golaha Xuquuqda Aadanaha Ee Qaramada Midoobay
Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka baxay Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay, isaga oo sheegay in golahani uusan hadda kadib u qalmin magaca uu wato. Shir jaraa’id oo ay si wada-jjir […]
Baarlamaanka Canada Oo Ansixiyay In Xashiishadda loo Cabo karo Faakihaysi.
Aqalka Hoose ee baarlamaanka Canada ayaa cod ku ansixiyey in la sharciyeeyo in xashiishadda ay dadku u cabbi karaan si faakihaysi ah. Sharcigaas oo ay soo bandhigtay xukuumadda haatan talada haysa ee Liberal-ka ah ayaa […]
Dawladda Mauritius Oo Hal Milyan Oo Doolar ku Gadaysa Jinsiyada Dalkeeda.
Dawladda Mauritius ayaa ajaaniibta u soo bandhigtay fursad ay muwaadiniin ku noqon karaan iyaga oo bixinaya hal milyan oodoolar oon celis lahayn. Qofka jinsiyadda noocaas ah dalbanaya haddii uu yahay xaas waxaa looga baahan yahay […]